बुधबार, ८ जेष्ठ २०७६,	- काशीराम शर्मा.	1.12K
बाँके, ८ जेठ ।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिए । त्यसैको विरोधस्वरुप २०६२ चैत २४ गतेदेखि नेपालमा राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन शुरु भयो । यो आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरुले जनआन्दोलनको संज्ञा दिएका थिए । राजतन्त्र मुर्दावाद ! गणतन्त्र जिन्दावाद ! भन्दै देशभर राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन चलिरहेको थियो । आन्दोलन उत्कर्षमा थियो ।
यो आन्दोलनलाई राजनीतिक दलहरुले जनआन्दोलनको संज्ञा दिएका थिए । राजतन्त्र मुर्दावाद ! गणतन्त्र जिन्दावाद ! भन्दै देशभर राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन चलिरहेको थियो । आन्दोलन उत्कर्षमा थियो ।
उपचारका लागि भेरी अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भयो । त्यस बेला उनका श्रीमान् शेरबहादुर विक भारतको गुजरातमा थिए । शेरबहादुर त्योभन्दा २÷३ दिनअघि घर आउन खोजेका थिए । श्रीमतीले ‘यहाँ त जनआन्दोलन चर्किएको छ, पान पसलसमेत खुला छैन, अहिले नआउनू’ भनेर खबर गरेकी थिइन् । श्रीमान्ले पनि श्रीमतीको कुरामा सही थापे, घर फर्किएनन् । कुरा भएको केही दिनमै शेरबहादुरलाई फोन गयो – ‘तपाईकी श्रीमती घरमा बिरामी छन्, छिटो आउनू ।’
प्रहरीले लाठी वर्षाउन थाल्यो । अश्रुग्यास र गोली चल्यो, मान्छेको भागाभाग भयो । विसं २०६३ वैशाख ५ गते हजारौं मानिसका बीचमा रहेकी तिनै निडर र निर्भिक सिमलघारी खजुराकी सेतु विकको छातीमा अश्रुग्यास लाग्यो ।
“दिनको एकपटक मैले यो चोक (सेतु विक चोक) को फन्को लगाउँछु । यात्रु पाएर मात्रै होइन, नपाए पनि म यो चोकको दिनमा एकपटक फन्को लगाउँछु ।
शेरबहादुरले शहीद सेतु विक चोकलाई दैनिक एक फन्का लगाउँछन् । ते¥ह वर्षअघिको जनआन्दोलनमा पत्नी सेतु विकलाई गुमाएका शेरबहादुर पत्नीको याद मेटाउन उनको मूर्ति हेर्नकै लागि त्यहाँ पुग्छन् । श्रीमतीसँग मृत्युअघि उनलाई जीवितै भेट्न पाएनन् । नेपालमा आन्दोलन शुरु हुनुअघि श्रीमतीलाई घर खर्चका लागि १० हजार भारतीय रुपैयाँ पठाएको शेरबहादुर सम्झन्छन् । उनी भन्छन् – “घरखर्च चलाउन र छोराहरु पढाउन भनेर १० हजार भारु पठाए । उनले त्यो पैसा मासेकी रै’नछिन् । पठाएको पैसा अटैचीमा सुरक्षित राखेकी थिइन् ।”
श्रीमती बिरामी भएको खबर पाएलगतै उनी गुजरातमा गरिरहेको कामलाई थाती राखेर नेपाल फर्किए । उनलाई आन्दोलनमा परेर मृत्यु भइसकेको खबर भने दिइएको थिएन ।